DFS oo hirgelisay Xarun Cusub oo dadka lagu Karantiilo – Radio Baidoa
DFS oo hirgelisay Xarun Cusub oo dadka lagu Karantiilo
By Webmaster	 On Jul 30, 2020
Sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta xarigga ka jaray Qeybta Karaantiilka COVID-19 ee Isbitaalka Banaadir ee Magaalada Muqdisho,kaas oo loo qalabeeyay si casri ah.
Wasaaradda Caafimaadka dalka iyo shirkadda Hormuud ayaa iska kaashaday dhismaha iyo qalabeynta lagu sameeyay Qeybta Karaantiilka COVID-19 ee Isbitaalka Banaadir oo laga hirgeliyay gudaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir.
Qeybta Karaantiilka COVID-19 ee Isbitaalka Banaadir oo ka kooban afar qeybood ayaa la dhigay 300 oo sariirood oo 50 kamid ah ay yihiin kuwa loogu tala galay bukaannada xaaladoodu darantahay ee u baahan in si gaar ah looga taxadaro xaaladooda caafimaad.
Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), oo u mahad celiyay dhammaan intii ka qeyb qaadatay dhismaha iyo qalabeynta ayaa hoosta ka xariiqay in hadii ay iskaashadaan dowladda iyo ganacsatada Soomaaliyeed la gaari karo guulo waaweyn.
Dib u dhiska iyo qalabeynta Qeybta Karaantiilka COVID-19 ee Isbitaalka Banaadir ayaa qayb ka ah dadaallada dowladdu ay ku horumarineyso hannaanka caafimaadka dalka.
Farmaajo & Guddoomiyaha Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo kulan yeeshey
Daawo”Madaxweyne Laftagareen Oo Direay Hambalyada Ciida
Kenya oo Dhoobleey u soo dirtay Khuburo baara sababta ay diyaarada u burburtay
Drs Xaawo Cabdi oo Caan ka aheyd Soomaaliya oo geeriyootay
Saraakiil ku dhimatay Dagaal Saaka Dhacay Deynuunaay